Izindaba - 37 ozophakamisa uhlangothi lwe-Container uzothunyelwa eKenya
Kungokokuqala ukuthi ikhasimende lethu laseKenya lithenge ophakamisa ohlangothini lwamakhonteyina angama-37ton kwa-CCMIE, futhi ikhasimende lisayethemba kakhulu i-CCMIE. Imenenja yethu yokuthengisa yenza ikhotheshini eningiliziwe ukuze ikhasimende likhethe kuyo, futhi ngokuya ngezidingo zekhasimende, sincoma ophakamisa ohlangothini lwesitsha ofanele kakhulu kuye.
Vele, ngemuva kokuthumela umdwebo kwikhasimende ukuze likhonjwe, ikhasimende lenze ukulungiswa okuhle. Ngoba ikhasimende beliyithengile inqola yokulayisha ohlangothini kwabanye abahlinzeki phambilini. Lapho i-trailer yekhamera eseceleni yehluleka ukusebenza ngendlela ejwayelekile, umphakeli akazange amsize ayixazulule futhi walishaya indiva ikhasimende. Lokhu kuthukuthelisa kakhulu ikhasimende. Ngakho-ke amakhasimende akhathazeke kakhulu ngezinsizakalo zangemva kokuthengisa nezinkinga zekhwalithi. Sikuqonda kahle ukukhathazeka kwamakhasimende ethu kahle. Sazisa amakhasimende ethu ukuthi sinohlelo oluphelele ngemuva kokuthengisa.
Abasebenzi bethu emva kokuthengisa baphendula imibuzo yakho ku-inthanethi amahora angama-24 ngosuku. Kunamavidiyo anemininingwane nezincwajana zokukusiza usebenze, futhi sinikeza amakhasimende amanye amavidiyo wokusebenza kwamanye amakhasimende. Ngakho-ke ungakhathazeki ngezinkinga zokuthengisa ngemuva. Sixazululwa yithimba lochwepheshe.
Iloli le-CCMIE Container self-loader lisetshenziselwa ukulayisha nokukhipha i-Container.
I-CCMIE Container side Loader igcina izinzuzo eziningi, isazi sokudlulisa, isisindo esiphansi se-tare
Ukusebenza kahle okuphezulu, izinketho zokuphakamisa okuthuthukile, ingcindezi yomhlabathi ophansi nokuzinza okuphezulu
I-trailer noma iloli ligibele.
Siyaqiniseka ukuthi ngemuva kokushintshana kwethu kokuqala, nokubambisana okwalandela, ngemizamo yethu ehlangene, ukubambisana kwebhizinisi phakathi kwethu kuzoletha izinzuzo kuzo zombili izinkampani zethu, inzuzo yomunye nomunye kanye nemiphumela yokuwina. Thina, i-CCMIE, singakunikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme noma izinsizakalo, futhi sinikeze nge-3-axis Container Loader Truck Trailer yaseChina emishinini emisha ePapua, Solomon Islands nakwamanye amazwe ngentengo yokuncintisana. Kudala sibheke phambili ekusebenzisaneni nabasabalalisi nabasebenzisi ezweni lonke. . Sicabanga ukuthi singahlangabezana nezidingo zakho ze-logistics. Samukela ngemfudumalo abathengi kuphiko lethu lokukhiqiza ukuze bathenge izixazululo zethu.
Uma futhi unesithakazelo, ungaxhumana nathi！